व्यक्ति होइन, प्रवृत्ति परिवर्तन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कांग्रेसबाट प्रशस्त गल्ती–कमजोरीहरु भए, भैरहेकै छन् । आम नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा कांग्रेसबाट कैयन् चूकहरु भए । यस्ता कमीकमजोरी भैरहँदा नेतृत्वमा बस्नेहरुमाथि नागरिकले प्रश्न उठाइरहे । कांग्रेसबाट जवाफ आएन ।
नेपाली कांग्रेसमा माथिदेखि तलसम्म नैतिक आचरणमा स्खलन आएको छ भनी स्विकार्न सके मात्र पार्टी, नेता–कार्यकर्तामा सुधारको सम्भावना रहन्छ ।
श्रावण १४, २०७८ रामचन्द्र पौडेल
केही महिनाअघि अमेरिकामा सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचन र हालै नेपालमा सरकार परिवर्तनका घटनाले सत्तामा बस्नेको ‘सबै थोक मै हुँ’ भन्ने व्यक्तिवादी सोच टिकाउ नहुने देखाएका छन् । सत्तामा पुगेपछि त्यसलाई सदाका लागि पेवा ठान्ने र लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष ‘सहज सत्ता हस्तान्तरण’ लाई स्विकार्न नसक्ने प्रवृत्ति पराजित भएको छ, नेपाल र अमेरिका दुवैतिर ।
सत्ता हस्तान्तरणको असहज परिस्थितिको पटाक्षेपपछि नेपालमा कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन अगाडि आएको छ । महाधिवेशन कस्तो होला, होला कि नहोला भन्नेजस्ता संशयबीच कांग्रेसजन यो महायज्ञमा होमिँदै छन् । महाधिवेशन किन र कसले गर्दा कांग्रेस विधानले तोकेको समयमा सम्पन्न हुन सकेन भन्ने विषयमाथि पनि महाधिवेशनका सदस्यहरूले चर्चा–परिचर्चा गर्ने नै छन् ।
कांग्रेसको महाधिवेशनले आगामी दिनमा कस्तो नेतृत्वको खोजी गर्ला ? र, मुलुकका जल्दाबल्दा समस्याहरूको पहिचान गरी निदानका उपायहरू कसरी अगाडि आउलान् ? यस्ता सबै पक्षमाथि महाधिवेशनमा सहभागी सबै सक्रिय सदस्य, समर्थक, शुभेच्छुकलगायत देश–विदेशमा कांग्रेसलाई माया गर्नेहरूबीच छलफल, बहस चल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
कुनै पनि निरंकुशतालाई नस्विकार्नु कांग्रेसको मूल चरित्र हो । कांग्रेस नेपालको लोकतान्त्रिक भावधाराको एक मात्र यस्तो नदी हो, जसको निरन्तर प्रवाहमा अन्य विचारधाराका राजनीतिक दलहरू विभिन्न कालखण्डमा समाहित भएका छन् । तसर्थ कांग्रेसको भविष्य कांग्रेसको लोकतान्त्रिक आचरण र मूल्यपद्धतिमै खोज्नुपर्छ ।
चौधौं महाधिवेशनले कांग्रेसजन र मुलुकलाई गुणस्तरीय लोकतन्त्रको मार्गचित्र खिच्ने अवसर दिएको छ । कस्तो लोकतन्त्र र कसका लागि लोकतन्त्र भन्ने विषय आज नेपालमा मात्र होइन, विश्वव्यापी बहसको विषय भएको छ । लोकतन्त्रको मात्र माला जपेर यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई टिकाउन र अगाडि बढाउन सम्भव छैन ।
हाम्रा जननेता बीपी कोइरालाले लोकतन्त्रलाई मलजल गर्न कांग्रेसमा समाजवादको प्रवेश साढे छ दशकअगाडि नै गराउनुभएको हो । नेपाल राष्ट्र र यसको राष्ट्रियताका विषयमा पनि कैयन् पटक चर्चा–परिचर्चा भएका छन् । समावेशी लोकतान्त्रिक विविधतायुक्त नेपालमा राष्ट्र राज्य बन्ने दिशातर्फको हाम्रो संवैधानिक प्रावधानलाई अझ दृढतापूर्वक र व्यापकस्तरमा अगाडि बढाउनुपर्नेछ । कांग्रेसको इतिहास यिनै माथिका केही गम्भीर राजनीतिक मूल्यपद्धतिसँग जोडिएर मात्र अगाडि बढ्न सक्छ ।
कुनै पनि पार्टीको रूपान्तरण आफ्नो गौरवशाली इतिहासको निरन्तरतामा मात्र खोज्न सकिन्छ भन्ने मेरो दृढ मान्यता छ । कांग्रेसको विगत गौरवशाली भए पनि वर्तमानमा यो खुम्चिएको छ । यो पार्टीलाई आम नेपाली जनताको भरोसा र विश्वासयोग्य बनाउन मेरातर्फबाट जीवनभर अनेकन् प्रयत्नहरू भएका छन् । संघर्षको मोर्चामा रहँदाबस्दा होस् वा राज्यको कुनै भूमिकालाई निष्कलंक भएर सम्पादन गर्ने सिलसिलामै किन नहोस्, मेरो प्रयत्न सदा सद्विचार एवं पारदर्शी र उत्तरदायी शासनतर्फ नै रह्यो ।
भावी महाधिवेशन कांग्रेसको गौरवशाली इतिहासको रक्षा गर्दै भविष्यको कांग्रेस निर्माणमा कोसेढुंगा हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो मत म सम्पूर्ण साथीहरूसमक्ष राख्छु । विगत तीन दशकको लोकतान्त्रिक परिपाटीमा मलगायत साथीहरूबाट भएका कमी–कमजोरीलाई लिएर आत्मालोचना गर्ने अवसर पनि यही हो । कांग्रेसबाट मुलुक र आमनागरिकका लागि कैयन् युगान्तकारी कामहरू भए पनि यसबीच नागरिक तहबाट हामीले प्रशस्तै आलोचना खेप्नुपरेको छ । यस्तो आलोचना सत्ताको दुरुपयोग अर्थात् भ्रष्टाचारका अनेकन् काण्डहरूले गर्दा र पदमा बस्नेहरूको अक्षमतालाई लिएर उठ्ने गरेको छ ।
पार्टीको तेह्रौं महाधिवेशन उद्घाटन गर्दा मेरा केही विचारहरू अगाडि आएका थिए । मैले माथिकै पृष्ठभूमिलाई आत्मसात् गर्दै राजनीति र राजनीतिज्ञप्रति वितृष्णा जागेको छ भनेको थिएँ । राजनीतिलाई सम्मानित क्षेत्र बनाउनुपर्ने चुनौती हामी पर्खेर नबसौं पनि भनेको थिएँ । फेरि पनि हाम्रो पार्टीबाट प्रशस्त गल्ती–कमजोरीहरू भए, भैरहेकै छन् । खासगरी संगठन निर्माण प्रक्रियामा र आम नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा कांग्रेसबाट कैयन् चूकहरू भए । यस्ता कमीकमजोरी भैरहँदा नेतृत्वमा बस्नेहरूमाथि नागरिकले प्रश्न उठाइरहे । कांग्रेसबाट जवाफ आएन । कांग्रेसको उपस्थिति संसद्, सडक र संघर्षका कैयन् मोर्चाहरूमा फितलो भयो । नेतृत्वपंक्ति कहीँकतै पनि भौतिक रूपले उपस्थित नहुँदा जनतामा निराशा फैलियो । संसद् निष्क्रिय भैरहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई निरंकुशतातर्फको यात्रामा अगाडि बढ्न सजिलो भयो ।
विगतको आमनिर्वाचनमा जनताले अपार मत दिएको नेकपा अधिनायकवादी प्रवृत्तिका कारण आज विघटन भएको छ, थप विघटनतर्फ उन्मुख छ । व्यक्ति नै सर्वेसर्वा हुने र व्यक्तिमा देखिने चरम महत्त्वाकांक्षाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले आजको अवस्था भोग्नुपरेको हो । कांग्रेसको गुटबन्दी र विभाजनबाट कम्युनिस्ट पार्टीहरूले शिक्षा लिन चाहेनन् ।
मेरो प्रयत्न कांग्रेसलाई सधैं गुटबन्दीबाट जोगाउनमा रह्यो । पार्टीमा कुनै गुट बनाउन नसक्ने नेता भनेर मैले आरोप पनि खेप्नुपर्‍यो । अझै पनि मेरो प्रयत्न नेपाली कांग्रेसलाई गुटबन्दी, भागबन्डा, विघटन, विभाजनकारी र अति महत्त्वाकांक्षी प्रवृत्तिबाट जोगाएर अगाडि बढाउने नै रहनेछ । चौधौं महाधिवेशनलाई निष्ठा र समर्पणको राजनीति बचाउने अभियानमा परिणत गर्नु छ । कांग्रेस इतिहासको ब्याजबाट होइन, भविष्यको सपनाबाट जीवन्त रहन सक्छ भन्ने विश्वास र भरोसाबाट कांग्रेसलाई अगाडि बढाउन अब ढिलो गर्नु हुँदैन । चौधौं महाधिवेशन यस दिशातर्फ सबै कांग्रेसजनका लागि उत्प्रेरक बनोस् भन्नेमा मेरो प्रयत्न रहनेछ ।
पार्टीलाई निरन्तरको वैचारिक बहसबाट जीवन्त पार्न सकिन्छ भनी आम कांग्रेस कार्यकर्ताले बुझ्न जरुरी छ । कांग्रेसको उज्ज्वल भविष्यका लागि पार्टीभित्र वैचारिक बहसको थालनी हुनुपर्छ । पार्टीको जीवन्तता निरन्तरको बहस, छलफल र तदनुरूपको कार्ययोजनाबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ । नेपाली कांग्रेसको लामो परम्परा पनि यही हो र यसैको निरन्तरतामै कांग्रेसको भविष्य खोजिनुपर्छ । मैले धेरै अगाडिदेखि पार्टीको यो परम्परालाई जीवन्त राख्ने प्रयत्न गर्दै आइरहेको छु ।
कांग्रेसको महाधिवेशन व्यक्ति परिवर्तन मात्र हैन । महाधिवेशन प्रवृत्ति परिवर्तनको माध्यम बन्नुपर्ने बहस र छलफल हामीबीच घनीभूत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेछ । कस्तो प्रवृत्तिलाई कांग्रेसमा हावी हुन नदिने, यो गम्भीर विषय छ । पार्टीमा पैसावालहरूको प्रभाव बढ्यो भन्नेमा साथीहरूमा तिक्तता छ । यो कुरा सत्य हो । बीपी कोइराला स्वयंले सत्तामा गएको कांग्रेसलाई हुने–खाने र सुकिलामुकिलाहरूले घेर्छन् भनी सतर्क गराउनुभएको हामी स्मरण गरौं । हाम्रो लडाइँ यस्तै प्रवृत्तिविरुद्ध हो अनि कांग्रेसमा पैसा, शक्ति, नातागोता र आफन्त मात्रले अवसर नपाऊन् भनी संघर्ष गर्नुपरेको हो । चौधौं महाधिवेशनमा सहभागी साथीहरूले यस दिशातर्फ नसोच्ने हो भने कांग्रेसभित्र कांग्रेसजन नै अल्पमतमा पर्छन् र यो पार्टीको अपहरण हुने खतरा छ, सुकिलामुकिलाहरूबाट ।
कांग्रेस अब पन्ध्रौं महाधिवेशनबाट सुधारतर्फ बढ्छ भनी पर्खने समय छैन । विगतका गल्ती–कमजोरी र आरोप–प्रत्यारोप गरेर मात्र पनि हामी भविष्यको कांग्रेस निर्माण गर्न सक्तैनौं । पार्टी विधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम चार वर्षको कार्यकालभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने महाधिवेशन अनेकन् कारणले संभव भएन । महाधिवेशन सम्पन्न गर्न अहिले पनि चुनौतीहरू कम छैनन् । तर यिनै अवरोध र चुनौतीहरूका अनेक पर्खाल पार गर्दै कांग्रेसले आफ्नो इतिहास निर्माण गरेको हो । तसर्थ अगाडिका चुनौतीहरूको सामना गर्दै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुको विकल्प अब छैन ।
कांग्रेसको महाधिवेशनलाई धकेल्दैधकेल्दै आज असहज अवस्थामा पुर्‍याइएको छ । कांग्रेसको वैधानिकतामाथि मात्र होइन, नेतृत्वको क्षमतामाथि पनि नागरिकले प्रश्न उठाउने स्थिति भएको छ । यिनै आरोह–अवरोधको समीक्षा गर्दै नेपाली कांग्रेसको वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सार्वजनिक रूपमै मैले महाधिवेशनका केही मूलभूत एजेन्डा साथीहरूसमक्ष राखेको छु ।
कुनै पनि पार्टीको पहिचान विचारबाट हुन्छ । कांग्रेसको पहिचान स्थापित भएकै यसको लोकतान्त्रिक विचारका कारण हो । त्यस्तै, समाजवादमार्फत कांग्रेस नेपाली समाजको अन्तिम सीमान्तकृत व्यक्तिसमक्ष न्याय गर्न पुग्छ भन्ने मान्यता यसको आर्थिक दर्शन हो ।
राजनीतिक स्वतन्त्रता मात्र होइन, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सबै मानिसको समान नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने विचार कांग्रेसको जग हो । यसमा केही धमिरा लागेका छन्, जसलाई हटाउन र विचारका अंकुरहरू प्रस्फुटन गर्न भावी महाधिवेशनले सार्थकता पाउने मेरो विश्वास छ । राज्य अन्तिम मानिससम्म पुग्ने र तिनलाई हेर्ने समाजवादमा मेरो विश्वास छ अनि कांग्रेसलाई त्यस दिशातर्फ बढाउनुपर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो ।
सिद्धान्त र आचरणमा समानता
कांग्रेसका सिद्धान्तहरू सर्वोत्कृष्ट छन् तर सिद्धान्तहरू एक्काइसौं शताब्दीमा देशको स्थिति, परिस्थिति र समयानुकूल सुधार भएर अगाडि बढेका छन् । जस्तो— चीन राजनीतिक रूपले नियन्त्रित तर आर्थिक रूपले खुला र उदारवादी अर्थनीतिबाट विश्वशक्ति हुन सम्भव भयो । नेपालको संविधान पनि समावेशी लोकतन्त्रमा आधारित छ । नेपाली जनताको संघर्षबाट आएको यो संविधानमा संसदीय व्यवस्थाको मौलिक विशेषतासहित केही अन्य व्यवस्था पनि गरिएका छन् । यो नयाँ प्रयोगबाट नेपालको राजनीतिमा केही असहजता र अनौठोपन देखिएको छ । केही खराबी पार्टीभित्र प्रवेश गरेका छन् ।
खासगरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्दा नेतृत्वले विवेक नपुर्‍याएको र न्याय गर्न नसकेको गुनासो आएको छ अनि गम्भीर त्रुटिहरू भएको भनी सबै पक्षबाट आवाज उठेको छ । लोकतन्त्र र कांग्रेसको भविष्य यसलाई सञ्चालन गर्ने नेतृत्वको आचरणमा भर पर्छ । कांग्रेस नेतृत्व सिद्धान्तविपरीत आचरण गरेको भनी समाजमा आरोपित छ । यसर्थ जतिसुकै राम्रो संविधान र पार्टी सिद्धान्त भए पनि नेतृत्वको सामान्य त्रुटिले पार्टीहरूको इमेज ध्वस्त भएको छ, कांग्रेसले आफ्नै अनुभवबाट पनि यो शिक्षा लिएको हुनुपर्छ ।
नेपाली कांग्रेसमा माथिदेखि तलसम्म नैतिक आचरणमा स्खलन आएको छ भनी स्विकार्न सके मात्र पार्टी, नेता–कार्यकर्तामा सुधारको सम्भावना रहन्छ । भावी महाधिवेशनमा कांग्रेसको सिद्धान्त र आचरणबीच समभाव राख्ने नेतृत्व विकास हुन सक्छ कि सक्दैन, यो अहम् प्रश्न आज कांग्रेसजनसामु छ । आम नागरिकको अपेक्षा कांग्रेसले राजनीतिमा नैतिक पक्षलाई गौण नठानोस् भन्ने छ । हामी कांग्रेसजनलाई नागरिकको अपेक्षामा खरो उत्रने चुनौती छ ।
कांग्रेसको संगठनभित्र अराजनीतिक मानिसहरूको भीड जम्मा भएका गुनासाहरू पनि आउँछन् । कांग्रेस नेतृत्वमा बस्नेहरूको असफलता हो यो । कांग्रेस नेतृत्वबाट देशभरिका कार्यकर्ताले वैचारिक नेतृत्व नपाएको युगौं भयो । तसर्थ वैचारिक रूपमा कांग्रेसलाई धारिलो बनाउन कांग्रेसको भावी महाधिवेशनले यस दिशातर्फ ठोस काम गर्ला भन्नेमा मलाई विश्वास छ ।
नेपाली कांग्रेसको विकास र समृद्धिको धारणाबारे पनि यो महाधिवेशनले व्यापक छलफल र बहस गर्नेछ । कस्तो विकास र कसका लागि विकास भन्ने प्रश्न आज विश्वसामु छ । कांग्रेस समतामूलक समाज निर्माण गर्न समाजवाद–उन्मुख राष्ट्र निर्माणमा कसरी अगाडि बढ्ने, नेपाल के गर्दा समाजवाद–उन्मुख राष्ट्र हुन्छ भन्नेबारे गहन छलफल र बहस जरुरी छ । अझ खासगरी कृषितर्फको सुधार, औद्योगिक विकासको वातावरण र सेवाक्षेत्रमा देखिएका अवसरहरूबारे कांग्रेस पार्टीमा छलफल नै बन्द भएका छन् । भावी महाधिवेशनबाट कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रबारे हामीले ठोस निर्णय गरी अगाडि बढ्न सक्दा मात्र मुलुकले सही दिशा समात्नेछ ।
विकाससँगै वातावरण गाँसिएको हुन्छ । नेपालमा प्रकृतिले अनेकन् उपहार दिएको छ । यी प्राकृतिक स्रोतहरूको भण्डारलाई भावी पुस्ताका लागि पनि सुरक्षित राख्दै वातावरणमैत्री विकास मोडलबाट हामी नेपाललाई समृद्ध राष्ट्रमा पुर्‍याउन सक्छौं । तर समृद्धि नाराबाट आउँदैन; यसका लागि त्याग, समर्पण र राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । प्रश्न छ, कांग्रेस कार्यकर्ताहरूमा यो इच्छाशक्ति छ त ? मेरो राजनीतिक जीवनको लामो अनुभवबाट भन्न सक्छु— कांग्रेसका निष्ठावान् कार्यकर्ता, सक्षम र विज्ञहरूबीचको समन्वयबाट देशको समृद्धि र नेपाली समाजको रूपान्तरण सम्भव छ ।
अन्तमा, कांग्रेस कार्यकर्ताहरूको मिसन अब सत्ता मात्र रहनु भएन । नेपाली जनताका समस्याहरू पहिचान गरी तिनको समाधानबारे अब नयाँ ढंगले चिन्तन र बहस गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । यस्तो बहसको प्लेटफर्म हामीलाई चौधौं महाधिवेशनले अहिले देशभरि उपलब्ध गराएको छ । नयाँ कांग्रेस निर्माणका लागि महाधिवेशन नयाँ नेतृत्व चयनको अवसर त हो नै, नयाँ विचार र संगठन निर्माणको अवसर पनि हो ।
प्रकाशित : श्रावण १४, २०७८ ०७:४४
रवीन्द्र मिश्रको दस्ताबेज राजतन्त्र ब्युँताउने मार्ग : मिलन पाण्डे
काठमाडौँ — अरू राजनीतिक दलभन्दा प्रगतिशील बन्ने गरी वैकल्पिक राजनीतिको एजेन्डा बोकेर हिँडेको विवेकशील साझा पार्टीमा अध्यक्षले नै पश्चगामी खालको दस्ताबेज ल्याएपछि विग्रह उत्पन्न भएको छ ।
मिलन पाण्डे - संयोजक, विवेकशील साझा पार्टी । तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना /कान्तिपुर
अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको संविधानका मूल विशेषता र गणतन्त्रप्रति नै आरोपित गर्ने दस्ताबेजका कारण दलभित्र दुई धार स्पष्ट देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा पार्टी संयोजक मिलन पाण्डेसँग ऋषिराम पौड्यालले गरेको कुराकानी :
पार्टी अध्यक्षले दस्ताबेजमार्फत गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न गर्नुभयो, होइन ?
अँ, अध्यक्षको दस्ताबेज पढ्दा त्यही देखिन्छ । उहाँले गणतन्त्रलाई आयातीत नै भन्नुभएको छ । गणतन्त्रको कमजोरीलाई राजतन्त्रको राम्रो पक्षसँग तुलना गरेको देखिन्छ । राजतन्त्रको नराम्रो र गणतन्त्रको नराम्रो पक्षसँग मात्र तुलना हुन सक्छ भन्ने लाग्छ ।
विवेकशील साझाका अध्यक्षको दस्ताबेज र राजतन्त्रवादीको मुद्दा मिलेको देखियो नि ?
त्यस्तो भनिहाल्ने अवस्था छैन । यो विषयमा पार्टीमा छलफल भएको छैन । एउटा व्यवस्थाको राम्रो पक्षलाई अर्को व्यवस्थाको कमजोरीसँग जोड्न मिल्दैन । मलाई पनि दुःख लागेको छ । गणतन्त्र मेरो बा र काका पुस्ताले लडेर ल्याएको व्यवस्था हो । यो व्यवस्था ल्याउन गोली खान तयार भएकाहरूका उदाहरण छन् । यस्तो व्यवस्थालाई आयातीत भन्नु चेत नपुगेको महसुस मैले गरेको छु ।
संघीयता खारेज गर्नुपर्ने र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने उहाँको प्रस्तावलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
त्यो उहाँ (मिश्र) को व्यक्तिगत विचार हो । अध्यक्षले नै त्यस्तो दस्ताबेज लेखेपछि स्वाभाविक रूपमा व्यक्तिगत भन्ने कि नभन्ने बहसको विषय हुन सक्छ । प्रस्तावित विधान र घोषणाअनुसार पार्टी प्रोगेसिभ हो । अध्यक्षको दस्ताबेजलाई पार्टीले स्वामित्वमा लिइसकेको छैन ।
विवेकशील साझा आन्दोलनका उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने पार्टी हो । अध्यक्षको विचार हाम्रो पार्टीको घोषणापत्रसँग मिल्दैन । संविधान अझ बलियो बनाउने भन्दै हामीले चुनाव लड्यौं । यो विषय (अध्यक्षको दस्ताबेज) मा पार्टीभित्र बहस हुन्छ ।
दस्ताबेजमा राजसंस्था र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई एकताको प्रतीक भनिएको छ । तपाईंको पार्टीमा गणतन्त्रवादी र राजतन्त्रवादी रहेछन्, होइन ?
कुरा चपाएर नगरौं । ‘कन्फ्युजन’ खालको सन्देश त गएकै छ । तर सचिवालय, केन्द्रीय समिति छ, त्यहाँ छलफल हुन्छ । त्यो दस्ताबेज छलफलमा ल्याउने कि नल्याउने भन्नेमा रवीन्द्रजीसँग सल्लाह भएको छैन । गणतन्त्रलाई आयातीत भनेर राजतन्त्रको बचाउ गरेको ‘भर्सन’ उहाँको हो । दस्ताबेजअनुसार अन्त्यमा राजतन्त्रमै पुर्‍याउने भन्ने देखियो । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल हेर्दा कमल थापाहरू खुसी भएको देखिन्छ ।
बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो नेपाली युवाले बनाएको पार्टी हो । चार वर्षमा मतदाता र कार्यकर्तासमेत हजारौं युवालाई सदस्य बनायौं । यो हिजोका आन्दोलनका उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने पार्टी हो । संविधानवादमा विश्वास गर्छौं । रवीन्द्रजीको विचार पनि उपलब्धिको रक्षा गर्ने नै हो भन्ने लागेको छ । तर उहाँको विचार नै फ्रेमबाहिर गएको छ । यसमा मलाई दुःख लागेको छ । व्यवस्था नै उल्टने अवस्था आउने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।
तपाईंहरूको पार्टी एकपटक फुट्यो, फेरि जुट्यो र अहिले फेरि गणतन्त्रविरोधी दस्ताबेज ल्याइयो । यस्ता घटनाले तपाईंहरूप्रति मतदाताले कसरी विश्वास गर्ने ?
यसले गम्भीर वैचारिक विचलन ल्याएको छ । अहिलेसम्म युवा साथी र मतदातालाई जुन विचारमा गोलबन्द गराएका छौं, त्यसमा प्रश्न आएको छ । मार्ग परिवर्तन भनेर तीन महिनामा अर्को दस्ताबेज आयो भने यो पार्टीको सदस्य बन्ने कि नबन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर पार्टीको स्थापनाकालको उद्देश्य र हजारौं युवाको विचारको प्रतिनिधित्वबाट निर्णय हुन्छ ।
छिट्टै सत्तामा पुग्न चाहे अस्थिर विचार आउन सक्छ । तर यो दस्ताबेजलाई अध्यक्षको व्यक्तिगत धारणा हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
दस्ताबेज सार्वजनिक भएपछि सुरु विवादसँग जोडेर तपाईंका पार्टी सदस्य र शुभचिन्तकलाई के भन्नुहुन्छ ?
पार्टीको विधान र घोषणापत्र यथावत् छ । आत्तिनु पर्दैन । जसरी व्यवस्थामा प्रश्न उठेको छ, त्यसले देश नै अस्थिर बनाउने परिस्थिति आउने हो कि भन्ने चिन्ता छ । हामी व्यवस्था परिवर्तन होइन, अवस्था परिवर्तन गर्न लागेका हौं । पार्टी विधिले चल्छ । पारदर्शिता, इमानदारी, धर्मनिरपेक्ष, संघीयतामा चार वर्षअघि प्रतिबद्ध रहेकामा अहिले त्यसविरुद्ध लाग्दा विश्वास हुँदैन । संविधानलाई पूर्ण पालना गर्ने भनेर हस्ताक्षर गरेका छौं ।
पार्टीमा यो मुद्दामा एक मत हुन सकेन भने के हुन्छ ?
मैले त्यहाँसम्म सोचेको छैन । जुन विचारबाट पार्टी गठन भयो, त्यसको डीएनए अहिले पनि छ । रवीन्द्रजीले आफ्नो विचार सच्याउनु हुन्छ भन्ने लागेको छ । दस्ताबेजअनुसार राजतन्त्र ब्युँताउने मार्ग देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल हेर्दा यो पार्टीलाई राप्रपाकरण गर्न खोजिएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । तर त्यो सम्भव छैन ।
प्रकाशित : श्रावण १४, २०७८ ०७:४०